ဘဝသစ်က နောက်ကြောင်းပြန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ဘဝသစ်က နောက်ကြောင်းပြန်	17
Posted by တောတွင်းပျော် on Feb 29, 2016 in Creative Writing | 17 comments
တစ်ခါက ပိုစ်တစ်ခုရဲ့ အောက်မှာ
လူတွေသေတဲ့ အခါ မှတ်ဉာဏ် မင်မိုရီ ပို့ လွှတ် လက်ခံတယ်ဆိုတဲ့ 
အယူအဆတစ်ခု သဂျီးက ကော်မန့် နဲ့ချပြခဲ့ ဖူးတယ်။
ဒီအယူအဆနဲ့ပတ်သက်ပြီး တူညီတယ်ထင်ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို
ကျနော် တောတွင်းပျော် ပြောပြချင်ပါတယ်။
ရွာသူားတွေ အတွေးပွားဖို့မီးတစ်စ တောတွင်းပျော် တို့ ပါတော့ မယ်။
တောတွင်းပျော်တို့အမေ့ ရွာကို ပြောင်းလာကာစပါ။ တောတွင်းပျော်တို့ အိမ်တောင်ဖက် ခြံချင်းကပ်ရက်က မဖွေးဖွေးရဲ့( အမည်လွှဲ ) ထူးခြားတဲ့ အဖြစ်ကို တောတွင်းပျော်ရဲ့အမေက မဖွေးဖွေးကိုမေးကြည့် တော့မဖွေးဖွေးက
ဟုတ်မှန်ကြောင်း သူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။
အဖြစ်အပျက်ဟာ တောတွင်းပျော်တို့ဒီရွာကို မရောက်ခင်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့ တာကို ပြန်ဆက်စပ်ရေးရတာမို့အချိန်ကာလ အသက်အရွယ်တွေကို အကြမ်းဖျင်း ခန့် မှန်းပြီးရေးထားပါတယ်။
မဖွေးဖွေးတစ်ယောက် ကလေးဘဝကို ပုံမှန်ကလေးတွေလိုပဲ ဖြတ်သန်းကြီးပြင်းခဲ့ ပါတယ်။
သူ အသက် ( ၁၂ ) အရွယ်လောက်မှာ တောတွင်းပျော်တို့ အိမ် မြောက်ဖက် နှစ်ခြံကျော်က ဦးအိပ်ရ (နာမည်လွှဲ ) ရဲ့ အမျိုးသမီး ဒေါ်ဖွားမေ ( နာမည်လွှဲ )
ဒီအချိန်ထိမှာ မဖွေးဖွေးဟာ ပုံမှန် ဖွေးဖွေးဖြစ်နေတုန်းပါ။
မဖွေးဖွေး စိတ်တွေ မှတ်ဉာဏ်တွေပြောင်းလဲသွားတာက …
ဒေါ်ဖွားမေဆုံးပြီး နောက် ၂နှစ် ၃နှစ်အကြာ ဦးအိပ်ရ တစ်ယောက် တစ်ပင်လဲတစ်ပင်ထူ နောက်အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ရာမှ အစပြုလာတာပါ။
ဒီအချိန်မှာ မဖွေးဖွေးဟာ အပျိုဘော်ဝင်စ ၁၄နှစ် ၁၅နှစ်အရွယ်ရောက်နေပါပြီ။
ဦးအိပ်ရ နောက်အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တယ် ဆိုတာ ကြားလိုက်ရင်ပဲ မဖွေးဖွေးဟာ ဦးအိပ်ရ အိမ်ပေါ် တန်းတက်သွားပြီး ဦးအိပ်ရရဲ့ နောက်အိမ်ထောင်ဖက်ကို သူ့ လင်ကို လုတဲ့ မိန်းမလို့တက်စွပ်စွဲပါတော့ တယ်။
ဦးအိပ်ရကိုလည်း အပျိုလေးတန်မယ့်လူကြီးတစ်ယောက်လို ပိုးစိုးပက်စက် အော်ငေါက်ဆူပူ လုပ်နေလိုက်ပါသေးတယ်။
မဖြစ်နိုင် မသင့် တော်တဲ့အခြေအနေမို့ရွာလူကြီးတွေက ဖျောင်းဖျနားချ တားဆီးကြတော့ လည်း သူမသာ ဦးအိပ်ရရဲ့မယားအမှန်ဖြစ်ကြောင်း ဦးအိပ်ရ အိမ်ထဲက ဒေါ်ဖွားမေ ပိုင်ဆိုင် သက်ဆိုင်ခဲ့ တဲ့အရာတွေရဲ့အကြောင်းကို အသေးစိပ်ပြောပြနေခဲ့ တယ်။
အပြင်လူတွေတော်ရုံမသိနိုင်လောက်တဲ့ဖွားမေဘဝတုန်းက သူ့ သားကို ဘာတွေပြောပြခဲ့ တယ်ဆိုတာကအစ အတိအကျပြောပြနေသေးတယ်။
ဒီအိမ်ဟာ သူ့ အိမ် ဦးအိပ်ရဟာ သူ့ လင် ..
ဟိုမိန်းမသာ သူ့ လင်ကို လာလုတာမို့ဒီအိမ်ပေါ်က မဆင်းတော့ ဘူး လုပ်နေတော့လူကြီးမိဘတွေက အတင်းပြန်ဆွဲခေါ်လာရတယ် ဆိုတယ်။
နောက်ပိုင်း ၂ကြိမ် ၃ကြိမ်လောက် ဦးအိပ်ရရဲ့နောက်အိမ်ထောင်ဖက်ကို သွားပြီး ရန်တွေ့ နေသေးတယ်။
တောတွင်းပျော်တို့ဒေသမှာ လူဝင်စားဆိုတာ များလွန်းလို့မထူးဆန်းတော့ တဲ့အရာတွေလို ရိုးနေပါပြီ။
တစ်ချို့ က အရင်ဘဝ မသေခင်ရထားတဲ့ဒဏ်ရာအမှတ်အသားတွေ ဒီဘဝမှာ ပြန်ပါလာတာတွေတောင် တောတွင်းပျော်တို့ ရွာထဲမှာရှိပါတယ်။
အရင်ဘဝအကြောင်း ပြန်ပြောနိုင်တဲ့ကလေးအတော်များများလည်း တွေ့ ဖူးတယ်။ တောတွင်းပျော်နဲ့သက်တူရွယ်တူတစ်ယောက်ဆိုရင် ..
သူ မူးလာရင် သူ့ အဖေအရင်းခေါက်ခေါက်ကို ပြောတတ်တာက
” အဖေ! အဖေ ကျနော် ဟိုဘဝတုန်းက ကျနော့် ကိုသတ်ခဲ့မမေ့ ဘူး.. ”
လို့မကြာခဏပြောတတ်တယ်။
အရင် ခေတ်ကာလ မကောင်းတဲ့ အချိန်က သူ့ အဖေဟာ လူတစ်ယောက် သတ်ခဲ့ ဖူးတယ်။
ဘဝဟောင်းက ခန္ဓာဆုံးပြီး ခန္ဓာအသစ် ဘဝအသစ်နဲ့မွေးဖွားလာပြီး
ဘဝဟောင်းက အဖြစ်အပျက် အကြောင်းအရာတွေကို ပြန်ပြီးပြောတတ်သူ
ဘဝဟောင်းက ထင်ရှားတဲ့အမှတ်လက္ခဏာတွေ အတိအကျ ပါလာသူ
တွေလို့ ဆိုရင် …
ခု အဖြစ်က မဖွေးဖွေး အဖြစ်က ဘယ်လိုများ ယူဆရပါမလဲ ။
လက်ရှိမှာ မဖွေးဖွေးဟာ အိမ်ထောင်ကျပြီး ကလေး ၃ယောက် အမေဖြစ်နေပြီး တောတွင်းပျော်တို့ ရွာနဲ့မနီးမဝေးရွာမှာ နေထိုင်နေကြပါတယ်။
ဦးအိပ်ရတစ်ယောက်ကတော့ဆုံးသွားခဲ့ တာ ၅နှစ် ၆နှစ်ရှိသွားပါပြီ။
-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ဒီပုံတွေက တောတွင်းပျော်တို့ ရွာက ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့လက်မောင်းနဲ့ခြေကျင်းဝတ်မှာ
မွေးကတည်းကပါလာတဲ့ဒဏ်ရာအမာရွက်တွေပါ။ ဘယ်ဖက်ခြေထောက်ဟာ ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ တစောင်းကောက်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ ညှပ်ဖိနပ်စီးလို့ မရဘဲ ရော်ဘာလည်ရှည်ဖိနပ်ကိုသာစီး ရတယ်။
သူငယ်ငယ်က ထူးခြားတာက ရွာထဲကို စစ်သားတွေဝင်လာရင် ကြောက်လန့် ပြီး အသဲအသန်ငိုတတ်တယ်။
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: အရင်ဘွ မှတ်မိတယ်ဆိုပြီး ရွာထဲ အကြွေးပတ်တောင်းဦးမှပါလေ
အိုင်ခု ဂေါ်လီကြွေး ငါးမူး
အောက်ပု ထွေပစ် ခြောက်ပြား
အောင်ကြု ဖဲပွတ် တမတ်
အောချု ဘီအီး တစ်စိတ်
ဆတ်ဆတ် ဒုတ်ထိုး သုံးချောင်း
ခင်ဇော် လက်ကောက် ၁ကွင်း
သံသရာကြွေး ထားတာ မကောင်းဘူး
ခင်ဇော် says: ငြိမ်ငြိမ်မနေတဲ့ မျောက် ကိ ပေးးမယ် ပေါ့,.
လက်ကောက် ၂ ကွင်းး
အလယ် က သံကြိုးးလေးးနဲ့..
တောတွင်းပျော် says: တော်သေးရဲ့ 
အရင်ဘဝက အကြွေးတောင်းခံရလွတ်သွားလို့ 
ခင်ဇော် says: တခြားး အကြွေးးတော့ မသိ…
တညားး မယ် အချစ်ကြွေးးတွေ ဆပ်လိုက်တာတာ ဆိုတာလေ..
လူ ဝင်စားး ကို ယုံတယ်…
တညားး လည်းး လူဝင်စားးလေ..
မယုံရင် ရွာထဲက မွဝေ တို့ မွသဲတို့ မွအိတို့ မေးးကြည့်.. သူ့တို့ အိမ်တွေမှာ ပြန်တိုင်းး ဝင်စားးတာ..
နောက်ထှာ .. စိတ်ဆိုးးနဲ့…
တဂျီးး လာမှ အတည်မန့်လိမ့်မယ်..
တောတွင်းပျော် says: ဒီ လူဝင်စားကတော့ 
တွေ့ မရှောင် လူမိုက်ဘွဲ့ နဲ့ 
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .ကိုယ်တိုင်တော့မတွေ့ဖူးသေးဘူးဗျ…ကြားဖူးတာတော့ဇတ်လမ်းစုံပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 390
တောတွင်းပျော် says: အရင်ဘဝက အသတ်ခံရချိန်မှာ
ခြေတစ်လုံး နှစ်ဖက် ကြိုးတုပ်ခံခဲ့ တဲ့အရာတွေ ဒီဘဝအထိ ပါလာတဲ့ 
ကောင်လေးတစ်ယောက်ပုံကို အဆင်ပြေရင် တင်ပေးပါအုံးမယ်။
အောင် မိုးသူ says: တောတွင်းပျော် ခုဘယ်နေရာက်တုန်း
တောတွင်းပျော် says: ရွာမှာ ကိုမိုးသူ
kai says: ကျုပ်သာဦးအိပ်ရဆိုရင်. .အော်.. အေးအေး..ဆိုပြီး.. အပျိုလေးနောက်တယောက်ရတာများ.. ထပ်ယူလိုက်မယ်… လို့.. မပြောပါဘူး.. မပြောပါဘူး…။
ကာယကံရှင်ဖွေးဖွေးကိုယ်တိုင်က.. ကာမပိုင်ပါတယ်ဆိုပြီး.. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်.. လာအပ်မင့်ဟာနော….။
သာဓု.. အမျှ.. ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 390
တောတွင်းပျော် says: ယုံဘာဒယ် …
အဲ .. အဲ သဂျီး
kotun winlatt says: ဟယ် …………….
ဗျို့ …. ကတော်ပျော် …. ခီများ အဲ့လူရီးဆီက ဆေးနည်းလေးဘာလေး မတောင်းထားလိုက်ဘူးလား??
တောတွင်းပျော် says: ရှိတယ်။ ယူမလား…
မဒမ်ကနေတဆင့်ပို့ ပေးလိုက်မယ်
kotun winlatt says: ဟေ့လူ ….. ပြဿနာ မရှာနဲ့နော်…….။
Thint Aye Yeik says: ဗီဒိုမင်းသမီးလေး ဖွေးဖွေးကတော့…. အနော် သင့်အေးရိပ်နဲ့…ရွှေလက်တွဲပြီး နွှဲဖို့… ကြိုးစားနေလေရဲ့
တောတွင်းပျော် says: ဘာနွှဲမှာလဲ … ဗျ
kotun winlatt says: နည်းနည်းထပ်ပြီး ဝင်ပွားလိုက်ဦးမယ်… ကျုပ်တို့ရွာနဲ့ နည်းနည်းလေးလှမ်းတဲ့ ရွာလေးမှာ ကျနော်နဲ့ ရွယ်တူတစ်ယောက်ရှိသဗျ… KIA စစ်သားသေလို့ ဝင်စားတာတဲ့ ထူးခြားတာက လက်ညိုးလေး ကွေးလိုက်ရင် ကလစ် …ကလစ်နဲ့ အသံမြည်သဗျ ….. သူ့အရင်ဘဝက အကြောင်းတွေလည်း မှတ်မိပြီး ပြန်ပြန်ပြောပြလေ့ရှိသပေါ့… မိုးတွေအုံ့တဲ့နေ့လိုမျိုးမှာ အတိတ်ဘဝအကြောင်းကို ပိုပိုပြီး ပြောပြချင်ပါသတဲ့လေ…..
ကျုပ်မှာလည်း ဘယ်ဘက်ချိုင်းအောက်မှာ အမှတ်ကြီး အကြီးကြီးပါသဗျ … စာတွေလို့တော့ ပြောတာပဲ … ကျုပ်ကတော့ အရင်ဘဝမပြောနဲ့ လက်ရှိဘဝရဲ့ အချို့ အချို့သော အကြောင်းအရာတွေကိုတောင် မမှတ်မိချင်ပါဘူးလေ….. တော်ကြာ အကြွေးတောင်းခံနေရမှာ စိုးလို့ … ဟေ ဟေးးးး